Apple Music Kugamuchira Kurarama Kuratidzira Chiitiko cheKayne West's New Album Mangwana China | Ndinobva mac
Apple Music iri kusimudzira kwete chete maartist ayo ari chikamu chechisiko chayo, asi zvakare kutora mukana wayo kusimudzira chikamu chemimhanzi. Kune izvi ichave iyo Inosarudzika yepamhepo nhepfenyuro inomiririra yepasi rose nhepfenyuro yechiitiko cheiyo kuratidzwa kwe Kanye Donda "Donda", iyo XNUMXth studio album yeRap star. Izvi zvakaziviswa Def Jam Kurekodha mu tweet.
Kanye West achange achiburitsa dambarefu rake DONDA 7/23 pic.twitter.com/KPVSzQVwwz
- Def Jam Rekodhi (@defjam) July 21, 2021
Def Jam Recordings yakazivisa kuburikidza nehukama hwemagariro kuti China chinotevera, mangwana, vachaburitsa dambarefu reKanye West rarama. Mune chiitiko chakatotengeswa kunze uye icho chichaitirwa kuMercedes-Benz Stadium muAtlanta. Apple Music ichatepfenyura chiitiko chekuteerera chaicho kubva 8 am nguva yemuno. Iyo album "Donda" ichaburitswa zuva rimwe chete gare gare, muna Chikunguru 23.
Zvakare zvakaziviswa neBeats, ndiani akaitumira panguva yeNBA Finals. Kushambadzira, kwakagadzirwa uye kurongedzwa neWest, kunocheka kubva kuDonda dambarefu vhidhiyo vhidhiyo yakanzi "Hakuna Mwana Akasiyiwa" uye nyeredzi yekumhanya yeAmerica Sha'Carri Richardson. Muchi shambadziro, maBeats Studio Buds anoenderana nevhudzi rep protagonist anokosheswa kwazvo.
Nyaya yaRichardson inoda kuziva chaizvo: Kugona kwake kwe100m kwaive kwakamuvimbisa rwendo rwekuenda kuTokyo, asi mhedzisiro yacho haina kuzadzikiswa mushure mekuyedza aine hutachiona hweTHC. Akazobvuma kuputa mbanje kuti atsungirire kufa kwaamai vake vekubereka uye akabvuma kumiswa kwemwedzi mumwe. Donda wekuWest, akatumidzwa zita raamai vake vanononoka, anouya mushure me2019 "Jesu ndiMambo."
Haisi nguva yekutanga Apple kuita zviitiko zvakasarudzika-zvakapfuura munguva yakapfuura. Tinofanira kurangarira iyo kuratidzwa kweiyo yega zvinyorwa «Billie Eilish: Yepasi Pamwe Yakapusa Blurry"muna Kukadzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple Music kuitisa yepamhepo kutenderera chiitiko pachiitiko cheKayne West's new album yemangwana mangwana China
Apple TV + inoda kuve neyayo yekurekodha studio muLos Angeles